Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiGerman Vanotamba Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; 'Bacon'. Redu Leroy Sane Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza iwe zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehutano hwake asi vashomanana vanofungidzira Leroy Sane biography nyaya iyo inofadza chaizvo. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Leroy Aziz Sané akaberekwa pa 11th yaJanuary 1996 ku Essen, Germany ne Souleyman Sané (baba) uye Regina Weber (amai).
Vabereki vake vakanga vabva kune dzimwe nyika. Baba vake vanobva kuSenegal vakatamira kuGermany nokuda kwezvikonzero zvebhola. Mumudzimai wake Regina Weber anobva kuFrance. Akagara muGermany mushure mokunge awana mukana wekuita gymnastics.
Paunounza Mutambi weGymnastics pamwe chete, zvakajeka kuti genetics inogona kuita chimwe chinhu panzvimbo chaiyo. Kuguma kwechigadzirwa chaiva chemashiripiti, ndiko; Leroy Sane. Ndiye mumwe akagara nhaka yake kubva kuna Amai nekukurumidza kubva kuna baba vake. Kune vakawanda, Icho chaiva zvechokwadi, mubairo wakanaka wekuva nevatambi vaviri vevashandi kuvabereki.
Sane panguva yehucheche hwake haana kumboda kuva mubhokisi. Mumashoko ake, "Handina kumbobvira ndaida kuva mutambi wenhabvu. Ndaifunga kuva muchengeti asi ndakazoziva kuti yakanga isiri kudana kwangu. Pandaiva 16 kana 17, handina kuenda kumapati. Ndakanga ndiine chido chimwe chete - bhora. "
Mukukurukurirana nevaya vanoziva Sane zvakanakisisa, mufananidzo wakabuda wemhuri yetarenda yemauto isingawanzoitiki. Sane akakurira munharaunda ye Wattenscheid, pakati pezvivako zvemabhizimisi zveRuhr Valley.
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Tanga Kubasa
Leroy Sane ndiye dhaimani yemazuva ano inofanira kudhindwa kubva kune imwe shanduro yekubudisa Schalke iyo yakabudisa Neuer, Ozil uye Benedikt Howedes munguva pfupi yapfuura. Iwe basa rake rakatanga paSG Wattenscheid 09 - timu yake yebhola rebhobho - pazera remakore mashanu. Leroy achiri kubhadhara baba vake nekugadzira denga rebasa rake. Izvi zvinosanganisira mukoma wake mukuru sekuonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Leroy Sane Utwere Nyaya - Untold facts
Maererano naLoyoy, Anoti: "Ndaitamba nababa vangu zvakawanda pandakanga ndichiri muduku. Ini nehanzvadzi yangu taiwanzoti kwaari 'uya, iwe unofanira kutamba nesu!' uye nguva dzose yaaizoenda mune chinangwa uye taizotora shots kwaari. Akazove mudzidzi wega wega. Baba vedu vakanga vari chirango sezvakaratidzwa muitiro wake wokudzidzisa. "
Leroy Sane Utano Nyaya- Baba vake vakadzidziswa sei
Yaiva pazera remakore masere iro wechidiki Leroy akasiya Wattenscheid kuSchalke. 'Pazera iroro, ane ruzivo rwetsoka rweruboshwe,' anodaro Ruhnert, mutambi wechidiki.
Kunyange zvazvo akabatana naSchalke mu2005, akagara makore matatu achitamba neBayer Leverkusen asati adzokera kuSchalke mu2011. Akasaina chibvumirano chake chekutanga chebasa naSchalke muna March 2014. Akaita Bundesliga yake kutanga mwedzi pashure paVfB Stuttgart. Sane akaitawo chikwata chake cheGermany Under-21s neDenmark munaSeptember 2015. Basa rake paSchalke raitungamirira kuguta rekuwana. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Rudo Leroy Sane Upenyu hwave huri huwandu hwevheti vangave vanoda kuda kutevedzera. Icho mhuri chaiyo yemitambo yakasimba. Kubudirira kwemitambo yemhuri kunoonekwa nezvose zvinoratidzwa mumifananidzo yemhuri pasi apa.
Leroy Sane Upenyu hwemhuri - Untold Story
BABA: Baba vaRoyoy Souleymane Sane vaiva nyanzvi yeBundesliga uye Senegal munyika yose. Akapedza chikamu chebasa rake mumatunhu makuru eGermany ne FC Nurnberg uye SG Wattenscheid. Akanga ari ane simba uye akakurumidza mutsara munguva yake. Iye aizivikanwa kuti akamhanya 100m nebhora mu 10.7 seconds panguva yake. "Samy" sezvaanenge achidaidzwa kuti akawana mambure 51 nguva mu 174 Bundesliga, uye akawana 65 mumasangano 152 muchikamu chechipiri.
Apo baba vaSouleymane vakatamba pano, vakatambura nechisimba zvikuru chisarudzo chechisimba. Kana tikatamba tichienda kuHamburg kana kuFrankfurt, paizova nebhanana yakakandirwa pamadziro, monkey zviratidzo uye "ooh-ooh-aah-aahs" akatungamirirwa kwaari. Souleymane haana kumbobvira atarisana nevafudzi uye akanga asingamboregi kubvuma. Akaita kuti ataure pamusoro payo. The Federation panguva iyoyo yakaita zvishoma, kutamira kune imwe chinhu chinhu chitsva. Izvo hazvizobvumirwi kuti zviitike mazuva ano uye, chivimbo, vakomana vacho havana kumbova nedambudziko.
Souleymane aiva mutevedzeri uyo aive akasununguka nenzira isiri yechisimba achishandisa mhizha kuti agare achikurudzira runyararo kunyange paairamba achishungurudzwa nemasikirwo emadzinza.
Akanga ari munhu akangodaro aishungurudzwa mumunhu wekuGermany munguva yake. Mutongi wechiGermany akamudana kuti njodzi yakaipa.
Vatsigiri vake vezvevenhau vakaita kuti Regina Weber atange kumuda. Imba yavo inotyisa-mazai kumasikirwo emasimba avo vasingatendi mutauro wechiGermany anonyanya kuzivikanwa mutambo wechikadzi angashamwaridzana naye.
Vabereki vaRoyoy Sane - Souleymane naRegina
Vose vakaudzwa kuti vane simba guru kune mumwe.
AMAI: Amai vake, Regina Weber ndeye 1984 medal bronze med medist in gymnastics. Akambotaridzirwa semutambo asingadiwi uyo akatora Mitambo yeOlympic kuLos Angeles nedutu.
Maererano naLoyoy, "Gymnastics haisi iyo mitambo yangu," akadaro. "Asi ini ndataura naye nezvazvo uye ndinoziva kuti akanga akanaka. Aive wechitatu mumitambo yeOlympic. Ndinofunga kuti ndiye wekutanga kubva kuGermany kuti akunde medari yeBronze. Ndinodada zvikuru pamusoro peizvi. "
Regina akazvipira zvakawanda zvekuenda kumubatsira mwanakomana wake kugara panguva yake yekutanga neGuta. Mufananidzo unoratidza kuita kwake mujimini kunowanikwa pasi apa.
Leroy Sane Amai vari kuita gymnastics
BROTHERS: Leroy ane hama mbiri dzakatanga basa ravo kutanga kuSchalke 04. Mukoma mukuru waRoyoy, Kim, akambova nematambudziko ne FC Koln.
Mukuru waRoyoy Sane
Akazvarwa muInnsbruck Austria. Akatanga basa rake semudziviriri asina kufanana nedzimwe hama dzake dzechidiki dzine mapiro.
Leroy Sane mwana mukoma
Sezvakaratidzwa mumufananidzo wemhuri yapfuura, Leroy ane mukoma muduku anonzi Sidi uyo ane makore 8 kupfuura. Sidi iye zvino ari muSchalke academy uye achiita zvinyorwa semazuva ekunyora. Vakawanda vanomuziva vanotenda tarenda yake chaiyo yakakura kudarika iyo yaRoyoy. Vatori venhau veGermany vakamboti Sadhi anotarisira kubatana nehanzvadzi yake muManchester rimwe zuva. Iye zvino, anofunga kuti anofanira kugara muGermany.
Baba vavo vakanga vaita kuti vanakomana vake vatatu vatevere tsoka dzake. Akatanga kudzidzira ivo pachavo paTttenscheid training field pamutambo webasa ravo. Ikoko ndiko kwaakadzidzisa nguva dzose mumakore ekutanga makumi mapfumbamwe. Zvechokwadi, Souleymane Sane akaberekera vana vakanaka uye kunyanya, vakomana vakanaka. Iro geni rakasimba raanoita pamusoro pemudzimai wake pamusoro pekuonekwa kweganda revana vake.
Mhuri yaRoyoy Sane yevarume
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Kunge Danny Drinkwater, Ousmane Dembele, Henrikh Mkhitaryan, uye team mate Gabriel Jesu, Ukama hwaLoyoy Sane hahuzivikanwe. Uyewo, pakange kusina chiitiko chehukama hwemakwenzi sezvinoitika Edinson Cavani uye Anthony Martial.
Leroy Sane's Girlfriend inofanirwa kunge yakanaka kwazvo nemurume wake kunyange iwe iwe unosarudza kuita kuti hukama hwehukama hwake huve hwakanyarara uye hunopesana nemaziso ekunyangadza kwezvinobudisa nhau. Vabereki vake vanofanira kunge vari ivo vanotungamirira kutungamirirwa pane izvi. Zvisinei, anotarisira kuita chiziviso chitsvene uye kutevera tsoka dze Roberto Firmino, Marcus Rashford uye Alex Oxlade-Chamberlain.
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Chikafu Chinodiwa
Anoti kudya kwake kunofadza ipeni carbonara. Uye sezuva ripi neripi revanhu vakawanda, Sane anozvishambidza ndiro yezviyo. Nhasi chisarudzo chekudya chamangwanani chechiGermany ndicho chiAmerican Fruit Loops.
Anodya uye anofamba panguva imwe chete. Pano, nyeredzi yeGermany inofamba ichienda kubhandi rake rinoshamisa rine dziva rekugezera.
Mushure mekudya, Sane anochera nguva imwe yekusimudza.
Inoteverwa nokuita jog inoputika pasina chifuva.
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Nhoroondo neMesut Ozil
Leroy Sane uye Mesut Ozil vakakurira mumusha umwe chete weGermany uye vose vakapinda muhurumende yeC FC Schalke 04.
Iwe Ozil yakanga iri makore 5 akapfuura kupfuura Leroy. Apo zvinosvika pahutano hwehuduku, Leroy anofarirwa kupfuura Ozil uyo vabereki vake vaiva varombo zvikuru.
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Idhori Yake
Yakabatsirawo kuti akakurira mubatsiri weBarcelona, ​​naRonaldinho naLionel Messi varo muenzaniso.
Zvisinei, anoona Pep semudzidzisi wake. Pep akafananidzwa zvakafanana naLoyoy Sane panguva yekupererwa kwake muGermany.
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Chimiro cheMutambo
Izvi zvinomuisa iye oga. Iye anokosha nekuda kwemaitiro ake, kuenzanisa, kupfura nekukurumidza. Uyezve, Sane's party-piece is his ability to 'nutmeg' vadzivisi vake - vanogogodza kuburikidza nemakumbo avo.
Sezvaanotaura- "Ndave ndichiriita kwenguva yakareba. Pandaiva muduku, nguva dzose ndaitamba kana ndaigona kudya, ndaizozviita. Handizvo nokuti ndinoda kuvhiringidza mumwe mutambi. Mumusoro mangu inzira yekufambisa mudziviriri uye ndicho chikonzero ndinozviita. "
Paanofananidzwa nemumwe mutambi uyo akaona mukurumbira wakafanana, A young Ryan Giggs angave akaenzanisa. Giggs aigona kutamba kwose kwose pamatambo, aigara achifamba. Leroy ari muduku zvakare-akafananidzwa, saGiggs pakutanga. Leroy ari pamapiro uye anoramba ari pamapiro, anofarira kuva nehoki pahombodo dzake.
'Anogonawo kutamba mushure mevarwi. Ndiyo mubvunzo wezera. Kana iwe uchida kutamba paManchester City pazera rake, kazhinji nzira yakanakisisa yekupinda nayo ingadai iri kutamba zvakanyanya pakutanga. Mushure mechinguva, achabata seri. Akakurumidza zvokuti haugoni kumudzivisa. '
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Birthday Mates
Leroy anogovera zuva rake rekuberekwa pamwe nemamwe mavheekete Emile Heskey, Jamie Vardy uye muimbi Mary J Blige.
Leroy Sane Birthday Mates- Vakawanda, Vardy naHenkey
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Inonyanya Kuodhura Mutambi weGermany
Leroy Sane ave akashongedzwa korona semutengi weGermany anonyanya kutengesa nguva dzose. Kuendeswa kwake kuMan City kwaiva kwekutaura kwechokwadi. Manchester City yakabhadhara Schalke yekutanga £ 37million asi chibvumirano chakasimuka kusvika pa £ 42m mushure mekunge mamwe mari yekuwedzera yakazadziswa.
Leroy Sane - Mutambo weGermany anonyanya kudhura munguva yake
Izvi zvinomuitawo Sane ndiyo inotenga mari yakawanda yeEpep Guardiola yekutanga yechando muChirungu yebhola. Basa rake rinoshandisa zvikwereti zvakabhadharwa neZimbabwe Cup Mesut Ozil, Mats Hummels, Mario Gotze naManuel Neuer.
Leroy Sane Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: FIFA Facts
Izvi zvinotevera ndeye FIFA 17 chokwadi chakawanikwa kubva FutHead. Leroy Sane FIFA 18 chokwadi pasina mubvunzo ndeimwe inonyatsojekesa kukura kwemazuva ano.
Leroy Sane FIFA Mashoko
Ederson Moraes Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Samir Nasri Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
Carlos Tevez Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 27, 2020
James Milner Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 18, 2020